सहारा यसै सहारा होइन ! | Hamro Khelkud
धेरै जसो कवि, गीतकार र गायक पोखराका बारेमा गीत रचना गर्न र गाउन साँच्चिकै लोभिन्छन् । यो सत्य हो । तर प्रेमप्रकाशले जसरी समग्र पोखराकै सुन्दरताको बयान गरेर गाए, सायद अरुले अलिक कन्जुस्याईं गरे कि? यो त सबै गीत सुनेपछि मात्र भन्न सकिने भयो ।
यद्यपी म यतिबेला गीत, संगीतको कुरा गर्दै छैन । खेलकुदको राजधानी बन्न तम्सिएको पोखराको चर्चा गर्दैछु । जहाँ भर्खरै आहा! रारा गोल्डकपको १८औं संस्करण भव्य र सभ्य ढंगबाट सम्पन्न भयो । नेपालगन्जमा खेलकुदका दुई प्रमुख खेलकुद इभेन्टको नेतृत्व गर्दा आयोजना र निरन्तरताका अप्ठ्यारा पक्ष मेरा स्मृतिमा पनि छन् । यसै वर्ष प्रधानमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण महिला भलिबल र नेपालगन्ज म्याराथनले क्रमशः छैटौं र पाँचौं संस्करण पुरा गरे । आहा! रारा गोल्डकपसँग तुलना गरिहाल्ने ल्याकत अहिले हामीसँग छैन । हामी भन्दा तीन गुणा बढ्ता समयको यात्रा पार गरिसकेको छ ।
यस हिसाबले आहा रारा गोल्डकप वयस्क अवस्थामा प्रवेश गरिसक्यो, प्रधानमन्त्री कप र नेपालगन्ज म्याराथन त भर्खर दौडन लायक भएका छन् । यसै परिवेशमा म नेपालगन्ज गोल्डकपलाई पनि सम्झन्छु । तीन संस्करण पुरा गरेर विगत दुई बर्षदेखि यात्रालाई अघि बढाउन नसकिरहेको यो प्रतियोगिता पनि यस क्षेत्रका फुटबलप्रेमीहरुको प्यास मेटाउन सफल भएकै हो । अब त स्तरीय मैदान र स्टेडियम हामीसँग तयारी अवस्थामा छ । यसले पनि निरन्तरताको आधार तयार गर्नुपर्नेछ ।
सहारा क्लबको सहारा एकेडेमी अझ साँच्चिकै उत्कृष्ट दृष्टान्त बनिसकेको छ । त्यहाँ पुग्दा पनि जोसुकैलाई आहा भन्न करै लाग्छ । विक्रम थकाली दाइ, सुदर्शन दाइसहित हामी दोबिल्लास्थित सहारा एकेडेमी पुगेका थियौं । केही समयपछि एन्फा उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङ र नवीन पाण्डे आइपुगे । नेम्वाङले जब ढोकेर एकेडेमी भवन छिरे, मलाई पनि लाग्यो सहारा वास्तवमै ढोग्न लायक हो । तीन तल्ले भवन, आँगन परिसर र मैदानको सरसफाइ जोकोहीलाई लोभ्याउने खालको संरचना र मनोरम दृष्य सहारा एकेडेमीको परिचय हो ।
अनाथ बालबालिकालाई फुटबलमार्फत राज्यको मुलधारमा ल्याउने सत्प्रयास साँच्चिकै पुजनीय छ । अनाथ बालकहरुका लागि सहारा साँच्चिकै सहारा बनेर आएको छ । अध्यक्ष केशव थापा पेशागत कर्ममा व्यस्त थिए सायद । पुर्व अध्यक्ष विक्रम दाइले नै सबै ब्रिफिङ गरे । क्लबका कोषाध्यक्ष राजु लालचन दाईले आफ्नो गाडीमा हामीलाई दोबिल्ला पुर्याए ।
पदीय जिम्मेवारी सहाराकर्मीका लागि औपचारिकता मात्र हो, सबै सेवाभावमा रमाउने खास विशेषता हो । देश विदेशमा रहेका सहाराकर्मीको खास परिचय यही रहेछ भन्ने बुझ्न मलाई समय लागेन । मैले त्यही अनुभुति गरें । दिउँसो पोखरा रंगशालामा साग फुटबल फाइनलपछि उनै कोषाध्यक्ष राजु दाईसँगै स्वतस्फुर्त सहाराकर्मीहरुले फोहोर टिप्दाको परिदृष्यले पनि मलाई तान्यो । अनि भन्न मन लाग्यो –‘आहा! सहारा, आहा! रारा ।’ पोखरा त साँच्चिकै पोखरा नै रहेछ ।